ကျောက်တော်မြို့နယ် အပေါက်ဝ စံပြကျေးရွာတွင် အလျားပေ ၃ဝဝ ခန့် မြစ်ကမ်းပါးပြို၊ နေအိမ် ၁၂ လုံ?? - Yangon Media Group
ကျောက်တော်မြို့နယ် အပေါက်ဝ စံပြကျေးရွာတွင် အလျားပေ ၃ဝဝ ခန့် မြစ်ကမ်းပါးပြို၊ နေအိမ် ၁၂ လုံ??
ရခိုင် ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ်အ ပေါက်ဝ စံပြကျေးရွာတွင် မြစ်ကမ်းပါးပြို၍ နေအိမ် ၁၂ လုံးနှင့် ဈေး ဆိုင်ခန်းအချို့ ပျက်စီးသွားကြောင်း ဒေသခံများထံမှသိရသည်။ အဆိုပါ မြစ်ကမ်းပြိုမှုသည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီခွဲခန့်ကနှင့် အလျားပေ ၃ဝဝ ကျော်အနံ ပေ ၇ဝ ကျော်အထိ ပြိုပျက်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများကဆိုသည်။
”အခုတော့ မပြိုပျက်ဘဲ ကမ်းပါးနားမှာ ကျန်တဲ့ဆိုင်ခန်းတွေက ပစ္စည်းတွေကိုရွာထဲကို ပြောင်းရွှေ့ နေကြတယ်။ နောက်ထပ်လည်း ပြိုလာနိုင်ခြေရှိတဲ့အတွက်လေ”ဟု ကျေးရွာဒေသခံ ဦးဦးဝင်းလှိုင်က ပြောသည်။ မြစ်ကမ်းပြိုမှုကြောင့် ကျား ၃၄ ဦးနှင့် မ ၃ဝ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီး ၎င်းတို့အား ဆွေမျိုးများနေအိမ်တွင် ယာယီနေထိုင်ခိုင်းထားရကြောင်း လည်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစိန် အောင်ညွန့်က ပြောသည်။ အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်ကြောင့် လူအသေအပျောက်နှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူမရှိခဲ့ကြောင်းလည်း ဒေသခံများက ပြောသည်။ ကုလားတန်မြစ်ကမ်းနံဘေးတွင် တည်ရှိသည့် အဆိုပါ ကျေးရွာတွင်ယခင် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှစတင်ကာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ယခုကဲ့သို့ မြစ်ကမ်းပြိုမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၍ နေအိမ်များ၊ ဈေးဆိုင်ခန်းများနှင့် သောက်သုံးရေ ကန်တစ်ကန်ပျက်စီးသွားပြီဖြစ်ပြီး မြစ်ကမ်းဘေးရှိ ချောင်းဝဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကိုလည်း ရွှေ့ပြောင်းတည်ဆောက်ထားရသည်။
”ကျွန်တော်တို့ရွာ မြစ်ကမ်းပါးက ကလိုင်ခံပြီးတော့ကို တိုက်စားနေတာပါ။ ရေအရင်းအမြစ် ဌာနကလည်း ပြုပြင်ပေးပေမယ့် ကမ်းပါးအပေါ်ယံပဲ လုပ်ပေးတော့ ကမ်းပြိုတာကို မကာကွယ်နိုင်ဖြစ်နေရပါတယ်။ ဖြစ်သင့်တာက မြစ်အလယ်လောက်ကနေ ရေလမ်းကြောင်းလွှဲပြီး ဘတ်ဂျက်အများကြီးနဲ့ အခိုင်အမာလုပ်ပေးသင့်တယ်”ဟု ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။ ယခုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး လာမည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြတောင်းဆိုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ကျောက် တော်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဦးထွန်းဝင်းက ပြောသည်။ ယခုအခါ အဆိုပါဖြစ်စဉ် ကြောင့် မြစ်ကမ်းပါးမှာ အက်ကွဲ ကြောင်းများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်ကာ ထပ်မံပြိုလာနိုင်ခြေရှိသည့်အ တွက် ကမ်းပါးရှိ အခြားဈေးဆိုင်ခန်း ၃ဝ ခန့်ကိုလည်း အရေးပေါ် ပြောင်းရွှေ့နေရကြောင်းလည်း ဒေသခံများက ပြောသည်။